यस वर्षदेखि एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने – Everest Dainik – News from Nepal
यस वर्षदेखि एसईई प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने
२०७५, ६ पुष शुक्रबार
काठमाडौं, पुस ६ ।
यस वर्षदेखि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ ।
देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि पहिलो पटक प्रदेश तहलाई एसइई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० का नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास निर्देशनालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने छ ।
‘हामीले यहाँबाट प्रश्नपत्र मात्र पठाउँछौँ’, उनले भने, ‘उत्तरपुस्तिकाको छपाइदेखि परीक्षा केन्द्र तोक्ने, केन्द्राध्यक्ष तोक्नेजस्ता काम प्रदेश सरकारले गर्ने छ ।’ नियन्त्रण कार्यालयले गएको वर्षको तोकिएको परीक्षा केन्द्र नबढाई तोक्न निर्देशन दिइएको छ । यसअघि नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दथ्यो । प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको उत्तरपुस्तिका भने नियन्त्रण कार्यालयमा आउने र समपरीक्षण तथा नतिजा प्रकाशन गर्ने छ ।
सरकारले यस वर्षदेखि एसइई प्रदेशस्तरमा नै गर्ने भनेपनि आवश्यक तयारी नपुगेकाले नियन्त्रण कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । यस वर्षको एसईई परीक्षा चैत १० गतेबाट हुँदैछ । उनका अनुसार परीक्षामा झण्डै चार लाख ८० हजार विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन् । उनले अहिले प्रश्नपत्रको काम भइरहेको जानकारी गराए । उज्यालोबाट
विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ३२ जनाबाट साढे ३९ लाख ठगी !
न्यूजिल्याण्डसँगको पहिलो टेष्टमा हार नजिक भारत
सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणः प्रधानमन्त्रीसहित ४ जनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
प्रियंकालाई आयुष्मानको टक्कर!
विध्वंसात्मक प्रदर्शन गर्दै फ्युरी बने बक्सिङका नयाँ च्याम्पियन
गठन भएको नौ महिनापछि कांग्रेसको छाया मन्त्रिपरिषद बैठकः के–के भए निर्णय ?
कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन जनावरमा परीक्षण गर्ने तयारी
आइपीएलः एकै पारीमा सर्बाधिक छक्का प्रहार गर्ने टप ३ क्रिकेटर